म अब फर्केर प्रदेशमा नगरमा चुनाव लड्दिन संघमै लडछु
सांसद,पर्वत क्षेत्र नं २
नेकपा एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनमा पहिलो स्थान ओगटेको छ । एमाले सांसदको नाताले कस्तो महशुस भइरहेको छ ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ । यो खुसीको कुरा हो । तर, अरु पार्टीहरु जनतामा यति कमजोर भएको बेला यो परिणामबाट मख्ख परिहाल्नु पर्ने केही छैन ।
पहिलो चरणमा प्राप्त गरेको पहिलो विरासतलाई दोस्रो चरणमा जोगाउन सक्ला त एमालेले ?
अहिले राष्ट्रियता, जनजिविका, विकास र समृद्धिका लागि एमाले जनता र मुलुकको आवश्यकता हो । यो कुरा आम जनताले बुझेका छन् । यी विषयहरु जनतामा पुर्याउन सके एमालेको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन । र एमाले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने ठाउँमा पनि पहिलो पार्टी भएर आउँछ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनका एमालेका अनुकुल प्रदेश थिए । दोस्रो चरणमा विषेश गरी तराईमा एमालेलाई फलामको चिउरा चपाए सरह होला नि ?
एमालेको लागि देशमा कहीँ अनुकुल र प्रतिकुल छैन । हिमाल, पहाड र तराई मुलुक भरी नै एमालेको उत्तिकै प्रभाव छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा छुटफुट घटनाबाहेक शान्तिप्रिय नै मान्नुपर्छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केही उशृंखल घटना हुनसक्छन् । तर, जनताको विश्वास एमालेमा छ । एमाले सबै ठाउँमा पहिलो पार्टी बनेर आउँछ । त्यो कसैले रोक्न सक्दैन । तराईमा पनि गरिब, विपन्न, इमान्दार, निष्ठावान जनता एमालेको पक्षमा छन् । उनीहरुले सबै चुनौतिको सामना गरेर एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएरै छाड्छन् । यो हाम्रो विश्वास हो ।
मधेसबादी दलका नेताले एमाले खुल्ला रुपमा मधेसमा मत त के टेक्ने ठाउँ पनि पाउँदैन भनिरहेका छन् नि ?
यी सबै प्रायोजित र हतास मानसिकताका उपज हुन् । एउटा राष्ट्रिय पार्टी जनताको बिचमा जाँदा किन उशृंखलता, उडण्डता देखाउने, अनि जान सक्दैन भनेर हल्ला मच्चाउने । जनतालाई आतंकित बनाउने । निर्वाचनबाट भाग्ने । यी सबै जनताले देखेका, भोगेका कुरा हुन् । यी सबैको जवाफ असार १४ मा जनताले दिनेछन् ।
मधेसमा एकातिर छुट्टै देश माग्ने सिके राउत र अर्कोतिर संविधान संशोधन मात्र माग्ने महन्थ ठाकुर छन् । यीनको माग सम्बोधन नगरी कसरी चुनाव हुन सक्छ ?
मधेसमा क्रियाशिल शक्तिहरु जसरी आफूलाई आत्मकेन्द्रित रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यो नै उनीहरुको समस्या हो । त्यो मधेसको समस्या होइन । मधेसमा समृद्धि र विकास चाहिएको छ । मधेसलाई अधिकार चाहिएको छ । त्यो सबै कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधान कार्यन्वयन हुन निर्वाचन आवश्यक छ । अनि यस्ता शक्तिहरु संधै अस्थिरता, अराजकता, उदण्डतामा आफूँलाई जिवित देख्नेहरु जनताबाट आफै समाप्त भएर जानेछन् । मधेस समृद्धि र विकासलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नेछ । त्यसको लागि मधेसका इमान्दार मान्छेहरु निर्वाचनबाटै समस्या समधान गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छन् । सारा मधेसमा निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ । चुनावले मधेसका वास्तविक प्रतिनिधिहरु जनताको मतबाट निर्वाचित हुनेछन् । नकि कसैको इसारामा प्रयोजित आन्दोलनमा जनता लाग्नेछैनन् ।
प्रशंग बदलौं, पर्वतमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो । तपाईँ अब केन्द्रिय तहको निर्वाचनमा लड्ने विचारमा हुनुहुन्छ कि प्रदेशमा ?
पर्वतमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । मतको हिसाबले सिटको हिसाबले, जिल्ला समन्वय एकलौटी बनाउने हिसाबले जसरी हेर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । अब, प्रदेश र संघको निर्वाचनको पनि चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यो निर्वाचनलाई पछिल्ला दुई वटा निर्वाचनको आधारको रुपमा पनि हेरिएको छ । संविधान अनुसार अब हुने निर्वाचनमा पर्वतमा संघमा १ र प्रदेशमा २ निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् । अब हुने यी निर्वाचनमा पनि एमालेले जित्ने आधार निमार्ण भएको छ । म संविधान बनाएको एउटा सांसद, निर्वाचित सांसद, अहिलेको निर्वाचनमा पाएको सफलता सबै हिसाबले अब लड्ने भनेको संघमा नै हो । म अब फर्केर प्रदेशमा, नगरमा चुनाव लड्दिन । जनताको अपेक्षा र पार्टीको मुल्यांकन पनि मेरा लागि संघमै हुन्छ होला ।
पर्वत क्षेत्र नं २ को सांसद हुनुहुन्छ । तपाईँ सांसद भएर के पायो पर्वतले ?
पहिलो कुरा त म सभासद् निर्वाचित भएर संविधान बनाउने ठाउँमा सक्रिय भूमिका खेलेँ । संविधानसभामा हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी रहयो भन्ने मलाई लागेको छ । त्यो आम जनताको मुल्यांकन पनि हो । अर्को म निर्वाचित भएर आउँदा पर्वतमा कम बजेट जाने २० जिल्ला पथ्र्यो । एउटा पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजना थिएन । अहिले पर्वत बढी बजेट जाने जिल्लामा परेको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु फेरि सुचारु भएका छन् । पर्वत क्षेत्र नं २ का जनता ३ जिल्ला घुमेर सदरमुकाम जानुपथ्र्यो । हुवासमा इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सदनमा कति पटक आवाज उठाएँ । मन्त्रालयमा कति लडाइँ गरेर त्यो सञ्चालनमा ल्याइयो । राज्य पुनर्संरचना गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन सभासद्को कस्तो भूमिका रहयो । त्यो जनताले नै मुल्यांकन गरेका छन् । पर्वतको विकासको अवधारणा, अहिलेसम्म कसले अगाडि सारेको थियो । त्यसैको आधारमा ति काम अगाडि बढेका छन् ।
सडक पूर्वाधारमा ठूलै आधार निमार्ण भएको छ । उत्पादनमुलक काममा केही लगानी भएको छ । वातावरणीय क्षेत्रमा नमुना काम भएको छ । १ हजार पिपलका विरुवाहरु रोपेर हुर्किरहेका छन् । जिल्लाका पञ्जेबाजाहरु संरक्षण र प्रवद्र्धन भएका छन् । खानेपानीमा ९१ प्रतिशत जनताले पाइपबाट शुद्ध खानेपानी पाएका छन् । शिक्षातर्फ सामुदायीक विद्यालयमा मन्टेस्वरी र अन्य सहयोग, स्वास्थ्य चौकीका भवन निमार्णमा तिब्रता, प्रत्येक गाउँपालिकामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था, सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुलाई परिचालन गरेर । अपांग, असहायलाई औषधी उपचार तथा ह्विलचियर वितरण । जिल्लामा व्यवस्थित खेलकुद मैदानको आधार निमार्ण, वृद्ध वृद्धाहरुलाई सबै साविकका गाविसहरुमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी सम्मान, सांसद विकास कोषबाट छुटेका पहुँच नपुगेका र जनताका अति आवश्यक योजनामा सहयोग गरेको छु । व्यवस्थित विद्युतिकरणमा जोड, सामुदायीक भवनहरुको निमार्ण, युवा क्लबहरुलाई सहयोग, आमा समुहहरु मार्फत टेन्ट र सामुदायीक सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन, पर्यटकीय हिसाबले पर्यटन पैदलमार्ग बाच्छा, लुंखु, शालिग्राममा निमार्ण, होम स्टेको व्यवस्थापन भएका छन् । यी त जनताको बीचमा गरिएका जिबन्त कामहरु हुन् । त्यसैगरी मन्त्रालयबाट जाने बजेटमा कृषि, पशुपालन, सिचाईँ, शिक्षाको भौतिक निमार्ण, भू–संरक्षण, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत कामको मुल्यांकन पनि हिजो र आजको तुलना गरेर हेर्दा देखिन्छ । एकजना सांसदले जनताप्रति उत्तरदायी भएर अहोरात्र खटेर गर्नसक्ने सबै काम भएको मलाई लागेको छ । त्यसको जनताबाट सही मुल्यांकन भएको मैले महशुस गरेको छु । अहिले भर्खरै एक अर्ब रुपैयाँ पर्वतलाई थप बजेट गएको छ । अबको दुई वर्षमा कालिगण्डकी करिडोर पर्वतबाट सञ्चालनमा आउने छ । फलेवासमा रिंगरोड बन्नेछ । दोबिल्ला–फलेवास–लुंखु–हुवास सडक कालोपत्रे हुनेछ । यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।आगामी दिनमा पनि यी कामलाई निरन्तरता दिन एकजना असली जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि पर्वतलाई चाहिएको छ । यसका लागि जनताले आफ्नो मन मनबाट त्यो मुल्यांकन गरेका छन् । त्यो जनमत अहिलेको स्थानीय निर्वाचनबाट पनि प्रकट भएको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि जनताले प्रतिनिधिको सही मुल्यांकन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।